धरानमा फैलिएको डेंगु ‘डेन–२’- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ३०, २०७६ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — धरानमा महामारीका रूपमा फैलिएको डेंगु कडा मानिने ‘डेन–२’ भएको विज्ञहरूले जनाएका छन् । मुलुकमा डेन–१, डेन–२, डेन–३, डेन–४ गरी चारै थरी डेंगु देखिने गरेको छ ।
‘धरानमा ‘डेन–२’ डेगु संक्रमण फैलिएको पहिचान गरिएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘संक्रमणले मृत्यु नभए पनि धरानमा डेंगु अत्यधिक फैलिरहेको छ, संक्रमितको संख्या ३ सयभन्दा माथि नाघिसकेको छ ।’
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले करिब ३० वटा नमुना परीक्षण गर्दा ‘डेन–२’ देखिएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार लामखुट्टेजन्य भाइरल संक्रमण डेंगुको कुनै विशिष्ट उपचार छैन । तर छिटो रोग पत्ता लगाएर उचित चिकित्सकीय हेरचाह पुर्‍याउन सके मृत्युदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार बैंककको एक अध्ययनले डेंगुको चार प्रकारमा सबैभन्दा कडा ‘डेन–२’ लाई नै भनेको छ । तर नेपालमा यो प्रकारको डेंगुले धेरै बढी मृत्यु भएको छैन ।
सन् २००६ मा मुलुकमा चारै प्रकारका डेंगु देखिएको औंल्याउँदै डा. पाण्डेले भने, ‘तर हाल बढी मात्रामा डेन–२ देखिन थालिएको छ ।’
उनका अनुसार सन् २०१० मा चितवन, धादिङ, तनहुँ, बुटवललगायत ठाउँमा डेन–१ देखिएको थियो । सन् २०१३ मा डेन–१ र डेन–२ देखियो । सन् २०१७ मा बर्दिवास, लालबन्दीलगायतमा डेन–२ देखिएको हो ।
कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, हेटौंडाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनले समेत केही महिनाअघि पोखरामा फैलिएको डेंगुमा समेत बढी डेन–२ नै रहेको बताए । डा. पाण्डे टेकु अस्पतालको रेकर्ड औंल्याउँदै मधेससहित मुलुकको करिब ४० जिल्ला डेंगु प्रभावित रहेको बताउँछन् ।
काठमाडौंसहित ठूला सहरमा डेंगु फैलिए नियन्त्रण गर्न सहज नहुने जनाउँदै उनले यसबाट जोगिन युद्घस्तरमा सबै निकायको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले डेंगु नियन्त्रणका लागि टेकु अस्पताललगायत यस क्षेत्रका विज्ञको सहयोग लिनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘मैले थाहा पाएअनुसार डेंगुविरुद्घको गतिविधि धरानमा त्यति व्यापक गर्न सकिएको छैन, अभियान फितलो भएको छ ।’
नेपालले आधिकारिक रूपमा सन् २००६ को नोभेम्बर महिनामा मुलुकमा डेंगु देखिएको जनाएको थियो । डेगु भाइरस मुख्य रूपमा पोथी एडिस एजिप्टी लामखुट्टे र केही हदसम्म एल्बोपिक्टसले फैलिन्छ । दिउँसो टोक्ने यो लामखुट्टेले नै चिकनगुनिया, यलो फिभर, जिका संक्रमणसमेत फैलाउँछ ।
संक्रमित व्यक्तिलाई टोकेपछि उसको परजीवी लामखुट्टेमा आउँछ । त्यही लामखुट्टेले पुनः स्वस्थ व्यक्तिलाई टोक्दा उसमा पनि संक्रमण फैलन्छ ।
मुलुकमा सन २००४ मा डेंगुको पहिलो प्रयोगशाला प्रमाणित बिरामी एक विदेशी भए पनि सन् २००६ मा चितवनमा यसको प्रकोप देखिएको थियो । यसपछि सन् २०१० मा सबैभन्दा बढी ९ सय १७ जनामा डेंगु भेटिएको थियो । त्यति बेला पाँच जनाले ज्यानै गुमाएका थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:५९
गाउँका काममा गाउँकै कामदार
पाल्पा — धुलै र फुस्रै भएर सडकमा काम गर्दै गरेका दोमबहादुर घर्तीमगरलाई कसैले पनि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भन्दैन । उनी सुन्दरढुंगा–जुठापौवा मोटरबाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुन् । ४७ वर्षीय घर्ती आफैं निर्माणका काममा मुख्य मिस्त्री हुन् ।
४ वर्षदेखि यही बाटोको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भएका उनले गाउँका युवालाई रोजगार दिँदै आएका छन् । ‘सकेसम्म डोजर पनि लगाउँदिनँ,’ उनले भने, ‘यही गाउँका युवालाई कामदारका रूपमा लगाउने र रोजगार बनाउने मेरो योजना हो ।’ चार वर्षयता उनी बाटो निर्माण समितिको अध्यक्ष भएर काम गरिरहेका छन् । ढुंगा फोर्ने, जाली भर्ने र नाली खन्ने सबै काममा उनी खटिन्छन् । उनको योजनाअनुसार अहिलेसम्म काम सफल भएको छ ।
बजेट फिर्ता गर्नु परेको छैन । १० देखि १५ लाख बजेटको काममा सबै गाउँका युवा परिचालन गर्छन् । गत वर्ष ठूलो पहिरो गएर भने सास्ती दियो । तीन महिना बाटो बन्द भयो । कामदार लगाएर नसकेपछि उनले डोजर प्रयोग गरेको बताए । रैनादेवी छहरा–६, जुठापौवाको नेपानेदेखि जुठापौवामा दैनिक २० भन्दा बढी कामदार लगाएर काम गराइरहेको उनले बताए । आवश्यक पर्दा ३०/४० जना पनि काममा लगाउने गर्छन् । ‘गाउँका युवा बाहिर गएर कामदार नै नपाइने समस्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ वर्षको ६ महिना मात्र काम पाउने भएकाले रोक्न पनि सकिँदैन ।’
तैपनि उनले युवालाई काममा लगाउने गरेका छन् । नाली खन्ने, रिटेनिङ वाल लगाउने, ग्याभिएन तारजाली भर्ने, ढुंगा निकाल्ने काममा युवालाई नै खटाउने गरेका छन् । ‘म आफैं पनि मिस्त्री भएकाले केही सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘आफैं काममा नखटिने हो भने ठगिहाल्छन् ।’ गाउँका युवालाई दैनिक ५ सय रुपैयाँ दिएर काममा लगाएका छन् ।
एसईई दिएका, कक्षा ११, १२ पढ्नेहरू फुर्सदको समयमा उनीसँगै काम गर्न आउने गर्छन् । ‘मलाई विदेश र तराईतिर काम गर्न जानुभन्दा यहीं ठीक लागेको छ,’ ढुंगा निकाल्न खटिएका रामबहादुर कुँवरले भने, ‘घरमै परिवारसँग बसेर यहीं काम पाएको छु ।’